Aslọ ọgwụ Huashan nke jikọrọ aka na Fudan University - Shenzhen Doneax Science and Technology CO., LTD
Aslọ ọgwụ Huashan jikọrọ aka na Mahadum Fudan
Aslọ ọgwụ Huashan nke mmekọ na Mahadum Fudan dị na Shanghai, na-ekpuchi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 50 afọ. Tọrọ ntọala na 1907. Ọ bụ ọkwa nke atọ nke ụlọ ọgwụ na-ejikọ ọgwụ, nkuzi na nyocha ， yana otu ụlọ ọrụ mkpuchi ahụike na Shanghai.
Lọ ọgwụ ahụ nwere usoro ọzụzụ 10: nyocha ahụ, ịwa ahụ aka, Neurology, Epidemiology, Clinical Integrated Chinese and Western Medicine, Urology, Nephrology, Cardiovascular Department, Imaging Medicine and Nuclear Medicine, na General ịwa ahụ. Ọkpụkpụ, nọọsụ, laabu, laabu, aka (ịwa ahụ aka), laabu (ọgwụ mgbochi), endocrinology, neurosurgery, ịwa ahụ aka, akwara, ọgwụgwọ ọdịnala ndị China (ọrịa ngụgụ), dermatology, urology, nephrology, ịwa ahụ, gastroenterology, oncology, infection, ghara ịgbanwe na nkà mmụta ọgwụ, egwuregwu na nkà mmụta ọgwụ, ọgwụ Onyonyo 20 isi specialties. Enwere ulo oru nlebara anya nke oma nke oma na 7 pharmacy, neurology, dermatology, laser therapy, nuklia medicine, nchoputa oria oru na neurosurgery, 1 WHO nyocha na ulo oru mmekorita nke ọzụzụ, na ihe dika ulo ogwu iri abuo nke 20, ulo oru nyocha di iche iche.
Thelọ ọgwụ ahụ nwere akwa a kwadoro 1216, nke nwere nkọwa PET / CT dị elu, 3.0intraoperative resonance magburu onwe ya, rediosurgery, mma gamma, 256rows nke CT, SPECT, DSA, sistemụ elektrọnik elektrọn (EBIS), Doppler ultrasound system, ammonia mma, mma mma ultrasonic, mma X, ube mmiri ọkụ, ihe ngwangwa ngwa ngwa na ngwa ọgwụ ndị ọzọ.
Na Septemba 2020, Shanghai Municipal Party Committee na Municipal Government kpebiri inye ya aha nke "Shanghai Advanced Group na-alụ ọgụ megide ọrịa COVID-19".